दुग्ध किसानको पीडा : न बिक्यो दूध, न बिक्छन् गाई ! | चितवन पोष्ट दैनिक
Updated: १९ जेष्ठ, २०७८
दुग्ध किसानको पीडा : न बिक्यो दूध, न बिक्छन् गाई !
१९ जेष्ठ, २०७८
भरतपुर । कोरोना भाइरसको बढ्दो सङ्क्रमणका कारण लगाइएको निषेधाज्ञाको चर्को मार दुग्ध उत्पादक किसानले पनि खेप्नु परेको छ । सरकारी संस्थान डिडिसीलगायत निजी डेरी उद्योगहरुले नियमित दूध नउठाइदिँदा दुग्ध उत्पादक किसानहरु चर्को मारमा परेका हुन् ।
जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ चितवनका सचिव किशोर बगालेले दुग्ध उत्पादक किसानहरुको दूध बिक्री हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘दुग्ध सहकारीहरुमा संकलन हुने दूध निजी डेरी उद्योगहरुले उठाएका छैनन्, जसका कारण दुग्ध सहकारी नियमित सञ्चालन हुन सकेनन् । त्यस कारण, किसानको दूध घरमै सडेर गइरहेको छ ।’ उनका अनुसार विगतमा जसरी सडकमा पोख्न नसकिएको हो, अवस्था उस्तै छ ।
चितवनमा ११० वटा दूध संकलन गर्ने संस्थाहरु छन् । ती संस्थाहरु हिजोआज हप्तामा तीन दिन पनि खुल्न सकेका छैनन् ।
‘दूध लामो समय स्टक गर्न सकिँदैन, निजी डेरीले नउठाए खेर जान्छ, अहिले त्यही भएको छ । एक लिटर दूधको ४० रूपैयाँ पनि किसानले पाउन सकेका छैनन्’, सचिव बगालेले भने, ‘निजी डेरीले ४० रूपैयाँमा दूध मागिरहेका छन्, नदिऔँ बिग्रन्छ, दिऔँ त लागतको एकछेउ पनि उठ्दैन ।’
किसानहरुका अनुसार आफैँले मेहनत गर्दा एक लिटर दूधको लागत मूल्य कम्तीमा ५० रूपैयाँ पर्छ । पानीको मूल्यसरी दूध बेच्न खोज्दा पनि बिक्री नभएको किसानहरुको गुनासो छ ।
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका पूर्वसचिव तथा किसान लोकनाथ सापकोटाका अनुसार दुग्ध किसानहरु विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उनले भने, ‘यतिबेला किसानको न दूध बिकेको छ, न गाई । दूध बेच्न डेरीले उठाउनुपर्छ, गाई बेच्न नयाँ किसान आउनुपर्छ । किसानहरुको गोठबाट गाई फुकालेर धपाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । ’
चितवनमा दैनिक ३ लाख १५ हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको थियो । अहिले दूध उत्पादन पनि घटेको छ । जिल्लाबाहिर जाने दूध पनि जान पाएको छैन । दुग्ध सहकारी संघका सचिव बगालेले भने, ‘चितवनमा उत्पादन भएको दूध दैनिक डेढ लाख लिटर दूध बाहिर जान्थ्यो, अहिले २० हजार लिटर दूध पनि जिल्लाबाहिर जान सकिरहेको छैन ।’
सचिव बगालेले भने, ‘निजी डेरीहरुले यतिबेला किसानबाट प्रतिलिटर ४० रूपैयाँ लिटरमा दूध उठाइरहेका छन्, तर उपभोक्ताले दूध खरिद गर्दा महँगो नै तिरिरहेका छन् । किसानको दूध सस्तोमा लिए पनि निजी डेरी उद्योगहरुले मूल्य घटाएकै छैनन् ।
भरतपुर–६ मा रहेको अन्नपूर्ण दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष ऋषि चापागाईंले कतिपय दुग्ध संकलन केन्द्रहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले भने, ‘किसानले चार महिनादेखि दूधको मूल्य पाएका छैनन्, कसरी गाईवस्तु पाल्न सक्छन् ? ‘सस्तोमा दूध बेच्नुछ, त्यही पनि चार महिनादेखि पैसा पाउनु् छैन भने किसानको अवस्था कस्तो भयो होला ?’ उनले प्रश्न गरे ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहाल डेरी उद्योगहरु नै डुब्ने अवस्था आइसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निषेधाज्ञापछि दूधको ३० प्रतिशत पनि बजार छैन, दूध लिएर कुन बजारमा बेच्ने ?
उनका अनुसार २०७६ साल चैतमा लकडाउन सुरू हुँदा धेरै डेरी उद्योगहरुले किसानले उत्पादन गरेको दूध खेर जान नदिन ठूलो परिमाणमा पाउडर दूध र बटर बनाएर राखेका छन्, त्यो अझै मौज्दातमै छ । दाहालले भने, ‘डिडिसी र डेरी एसोसिएसनसँग करिब ३ अर्ब रूपैयाँबराबरको धुलो दूध (पाउडर) र बटर मौज्दात छ । अब त मौज्दात गर्ने ठाउँ छैन, कसरी नियमित दूध लिन सक्छौँ ?’ सरकारी संस्थान डिडिसीले पनि दूध लिन नसकेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘किसानलाई मर्कामा पार्ने कुनै मनसाय होइन, यहाँ डेरी उद्योग नै डुबिसके, चितवन मिल्क उद्योग अहिले बन्द नै छ ।’